Qaybta 1: Waa maxay dadka caadiga ah la sameeyo marka ay iska beddelaan iPhone in Google Nexus
iPhone isticmaalaan nidaam hawlgalka macruufka iyo Google Nexus u isticmaalaan ah nidaamyada hawlgalka Android. Tani waxay sababi kartaa dhibaato marka aad isku daydo in ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya labada qalabka. Habka loo isticmaalo xogta ka iPhone gudbaayo Google Nexus waa in gurmad iyo badbaadin xogta ka iPhone kombiyuutarka ah. Ka dib, xogta loo gudbin doonaa on Google Nexus via habab kala duwan, sida toos ah ama barnaamijyadooda. Qasaaraha iska luminaysaa xogta qaar ka mid ah ama nuqul ka kooban xogta aad. Haddii aad qabto wax badan oo data, badan tahay in aadan ku waani oo xogta aad ka badbaadiyey iPhone iyo xogta oo aad ku kaydsan aad Google Nexus. Habka ugu fudud ee kiiskan, waa in la isticmaalo natiijada biirtay hawlaha gaarsiisay codsiga, tusaale ahaan.
Qaybta 2. Easy xal: 1 click in ay xogta ka iPhone wareejiyo Google Nexus
Wondershare MobileTrans waxa loogu adeegsaday transfering xogta ka taleefanka si phone kale sida farriimaha, xiriirada, abuse wac, jadwalka taariikhda, photos, music, video iyo barnaamijyadooda. Sidoo kale waxaad dib kartaa ilaa aad iPhone iyo badbaadin xogta aad kombuutarka, tusaale ahaan, iyo ka dib soo celin marka aad rabto. Asal ahaan dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in aad si degdeg ah loo wareejin karaa telefoonka ah inay telefoonka kale. The qalabka Google Nexus oo ay taageerayaan Wondershare MobileTrans yihiin Google Nexus 5, Google Nexus 4, Google Nexus 7, Google Nexus S, Google Nexus 10, Google Nexus S 4G, Google Nexus, Google Nexus One. Oo haddii aad rabto in aad xog ka iPhone wareejiyo, waa in aad ogaataa in iPhone ay caawinayso Wondershare Mobile Trans waa iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 5, iPhone 4s.
Waxaan horey uga soo hadalnay arrimo hawlgalka nidaamyada ka iPhone iyo nidaamyada hawlgalka Android ka telefoonada Google Nexus Waxay kala duwan yihiin iyo xogta aan si habboon la wadaago ka mid ba midka kale of this laba qalab kala duwan. Tani waa sababta, halkii la isticmaalayo habka gacanta ku, waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans in xogta ka iPhone ah wareejiyo ah phone Google Nexus. Iyadoo Wondershare MobileTrans, aad wareejin karaan xiriirada, sawiro, fariimaha, songs, videos ka iPhone in a phone Google Nexus. Si ay u sii wado, waa inaad marka hore in ay ku xidhmaan qalabka si aad u computer ah. Ka dib marka aad raacdo tallaabooyinka ka hoos ku qoran waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ka mid phone in telefoon kale.
Si aad u isticmaasho habkan, waxaad u baahan tahay kombiyuutar, iPhone ah, a phone Google Nexus iyo Wondershare MobileTrans qalab.
1. Isku aad iPhone iyo telefoonka Google Nexus in Computer ah
Your iPhone iyo telefoonka Google Nexus waxa loo dhiibaa la cable USB ah. Qaado fiilooyinka USB iyo xirmaan telefoonada si aad u your computer. Fur Wondershare MobileTrans oo guji "Start" in ay galaan taleefanka si uu suuqa kala iibsiga telefoonka. Ogaado MobileTrans labadaba telefoonada si degdeg ah haddii ay si sax ah ugu xiran. Waxaad arki doontaa wax button yar inuu ku dhajisan u dhexeeya labada qalabka iyo aad u isticmaali kartaa haddii ay doortaan in ay xogta ka Google Nexus wareejiyo si aad iPhone. Xogta aad All sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, abuse wac, barnaamijyadooda, photos, music, videos ku qoran yihiin oo aad kala dooran kartaa macluumaadka aad rabto in lagu wareejiyo. Haddii aad doonayso, xogta aad nadiifin kartaa ka Google Nexus ka hor si ay u bilaabaan dayanayaan on qalab aad xogta cusub.
2. Isticmaal Start nuqul ka badhanka si ay u gudbiyaan xogta ka iPhone in aad telefoon Google Nexus
Malaha u baahan tahay in aad si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ka iPhone in Google Nexus. Laakiin, haddii aad u baahan tahay oo kaliya waxyaabaha dhowr ah, waxa aad awoodi kartaa in aad doorato xogta in aad rabtid in loo soo wareejiyo. Just hubi waxyaabaha kuwa. Ka dib markii doorashada la sameeyo, waa in aad si riixdo badhanka Start Copy. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto warbixinta ka soo baxday ilaha iPhone in loo gudbin karaa si aad u socoto Google Nexus telefoonka. Waa arrin aad u muhiim ah in aan barkinta aad iPhone iyo telefoonka Google Nexus. Haddii ay taasi qalad ah dhacaya, waa in aad billowdo oo nidaamka oo dhan.
Liiska kuqor Dhammaan daydo ee Google Nexus.
Nexus 9, iyadoo Android 5.0 shaqeeya hurdiga ah waa kiniinka la 8.9 inches shaashadda.
Nexus 6, la Android hurdiga ah version 5.0 waa telefoonka kula 6 inches Bawdada HD bandhigay.
Nexus 5, telefoonka isagoo weyn 8 camera MP loo isticmaalo xaar ah + qabashada sawiro by maalin iyo sawiro ka af habeen ah.
Google Nexus kale waa: Nexus 4, Google Nexus 7, Google Nexus S, Google Nexus 10, Google Nexus S 4G, Google Nexus, Google Nexus One.
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka Google Nexus